किन फरफराउँछ आँखा ? यी हुन् कारण | Rochak
September 22, 2021 September 22, 2021 NepstokLeaveaComment on किन फरफराउँछ आँखा ? यी हुन् कारण
हाम्रो समाजमा आँखा फरफराउनुलाई शुभ या अशुभ सँकेत मान्ने अन्ध विश्वास छ । आखा फरफराउनुलाई कुनै घटना वा खबरप्राप्तिको पूर्वसंकेतसित जोडने गरिन्छ । दाहिने आँखा फरफरायो भने शुभ, देबे्र फरफरायो भने अशुभ समाचारको सुचकको रुपमा लिने गरिन्छ । यो विलकुल गलत मान्यता हो ।
आखा फरफराउनु पुर्णतया हाम्रो जैविक कारण हो । आँखा वरपरका साना मांसपेशी तथा नशामा हुने हलचलकै कारण आँखा फरफराउँछ । प्रायः माथिल्लो ढकनी फरफराउँछ भने कहिलेकाही दुबै ढकनी फरफराउन सक्छ । यो फरफराई केही सेकेण्ड देखि केहीघण्टासम्म हुनसक्छ । कसैकसैलाई हप्तादिनसम्म पनि आँखा फरफराउने गर्छ ।
आखा फरफराउनु सामान्य हो । कसैकसैमा यति जोरदार हुन्छ कि हामी दुबै आँखा चिम्लिन बाध्य हुन्छौ । यस्तो अवस्थालाई मेडिकल भाषामा ‘ब्लोफ्यारोस्पाजम’ भनिन्छ । आँखा सँगसँगै यदि आधा अनुहार पनि चल्यो भने, त्यसलाई प्रायः ‘फेसियल नर्भ’ भन्ने नशाको समस्या मानिन्छ । यस्तो समस्यामा आँखा पूर्णरुपमा बन्द हुन्छ र यो प्रकृया लामो समयसम्मचलिरहन्छ । यसले गर्दा दृष्टिमा पनि समस्या हुन्छ ।
१) ईडियोपेथिक (बिनाकारण )
४) आँखाको दुखाई
५) धुम्रपान, मद्यपान तथा क्याफिन
६) सुख्खा आँखा
९) पोषकतत्वको कमी / असन्तुलनता
१०) बढि उज्यालो
बिभिन्न अध्ययन अनुसार तनावलाई नम्बर एक कारणको रुपमा लिइने गरिन्छ । प्रायः महिलामा देखा पर्ने यो समस्या, कुनै कुनै मानिसहरुमा डरलाग्दो रुपमा पनि प्रस्तुत हुने गर्छ । यस्तो समस्याक कारण हुन:
१) परेलाको चाँया
२) आँखा पाक्नु
४) परेला भित्र गढ्नु
५) नानीमा घाउ हुनु
६) औषधीका सेवन
कहिलेकाही औषधिका कारण पनि आँखा फर्फफराउने गर्छ । छारे रोग, मानसिक रोगका लागी प्रयोग गरिने औषधीहरुले पनि आँखा सुख्खा बनाएर यस्तो रोग निम्त्याउन सक्छ ।
त्यस्तै, बेल्स् पाल्सि, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, पार्किनसोनिज्म इत्यादी लगायतका नशा तथा शरिरिक रोग सम्बन्धि समस्याका कारण पनि आँखा फरफराउने गर्छ ।
प्रायः आँखा फर्फराएमा कुनै उपचारको जरुरत पर्दैन । यो आफैमा ठिक हुने समस्या हो । तैपनि केही कुरामा ध्यान दिएमा यो समस्या समाधान हुनसक्छ ।
१) तनाव कम गर्ने
२) निन्द्रा पुरा गर्ने
३) आँखालाई तातोले सेक्ने
४) आँखाको मसाज गर्ने
५) कृत्रिम आँशुको प्रयोग गर्ने
६) रक्सी, चुरोट तथा क्याफिनको सेवन कम गर्ने
अलि जटिल रुपमा प्रस्तुत भएको खण्डमा वा यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा नेत्ररोग बिषेशज्ञको परामर्श लिनुपर्छ ।
१) आँखा रातो भएर सुन्निनु
२) आँखाको ढकनी झर्नु
३) धेरै समय सम्म पनि आखा फरफराईरहनु
४) अनुहारको अरु भागहरु पनि संलग्न हुनु ।
गुल्मीमा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका ३ जनाको ज्यान गयो, पृथ्वीराजमार्ग अवरूद्ध